Kushambadza kweNandos SA Koparira Nandos Zim
Mbudzi 29, 2011
Vechidiki vebato reZANU-PF muHarare vanoti havasi kufara neshambadzo iri kuburitswa neNandos yeku South Africa panhepfenyuro dzemunyika iyi.
Vechidiki ava vanoti vachakurudzira veruzhinji kuti varege kutenga chikafu kubva kuzvitoro zveNandos kana kambani yeNandos yekuSouth Africa ikaramba ichiburitsa mufananidzo wekushambadza chikafu chayo unoburitsa munhu wavanofungidzira kuti mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, semumwe wevadzvanyiriri vasara pasi rese.
Mufananidzo uyu unoburitsa munhu anofungidzirwa kuti ndiVaMugabe vaine vamwe vadzvanyiriri vakabviswa nechisimba vanoonekwa samuchakabvu Saddam Hussein veku Iraq, pamwe namuchakabvu Muammar Gaddafi, avo vaive mutungamiri we Libya.
Mukuru wevechidiki mubato reZanu PF muHarare, VaJim Kunaka, vanoti havangaregi zvitoro zveNandos zvichiburitsa mufananidzo yakadai iyo vanoti inoshora mutungamiri wavo.
Asi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mukambani yeInnscor iyo ine zvitoro zveNandos muZimbabwe, VaMusekiwa Kumbula, vanoti Nandos Zimbabwe yakasiyana neNandos South Africa uye Nandos Zimbabwe haineyi nezvinoitwa neNandos South Africa.
Asi VaKumbula vatiwo ivo pachavo havatenderani nezviri kuitika kuSouth Africa.
Asi VaKunaka vati vachanyora gwaro rine chikumbiro chavo chavachasvitsa kumuzinda weSouth Africa, kuitira kuti mutungamiri wenyika iyi, VaJacob Zuma, vawane zvavangaite panyaya iyi.
Sachigaro weZanu PF mudunhu reMashonaland East, VaRay Kaukonde, ndivo mumwe wevakuru vakuru vekambani ine zvitoro zveNandos muZimbabwe.
Nandos ine nzvimbo dzekudyira mumadhorobha makuru ese muZimbabwe
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika yakazvimirira, Va Livingstone Dzikira, vanoti zvakaitwa ne Nandos – South Africa, hazvina hunhu sezvo zvichininipisa mutungamiri wenyika ari pachigaro.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika inotaura yakazvimirira, Va Charles Mangongera, vanotiwo havaone chakakanganiswa neNandos yeku South Africa.
Hurukuro naVa Livingstone Dzikira